Ikhaya-ukusuka-ekhaya kwigadi yendlu ye-2-3, Crewe. - I-Airbnb
Ikhaya-ukusuka-ekhaya kwigadi yendlu ye-2-3, Crewe.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCrewe Short Lets At Victoria Court
UCrewe Short Lets At Victoria Court yi-Superhost
Ngaba ujonge indawo yokuhlala esemgangathweni kufutshane nesikhululo saseCrewe okanye amashishini alapha ekhaya?
Nantsi indlu yegadi yanamhlanje elungele ukwamkela iindwendwe ezi-2 ukuya kwezi-3 kwikhaya eliqaqambileyo-ukusuka-ekhaya elikumgama nje wemizuzu embalwa ukusuka kwisikhululo sikaloliwe, iivenkile, iindawo zokutyela kunye namashishini.
Indlu yonke ibonakaliswe kakuhle, kunye negumbi lokulala eli-1 elinokulungiswa kunye nebhedi ephindwe kabini okanye ii-singles ezi-2 kunye nebhedi yesofa kabini kwigumbi lokuhlala.
Bhukha ukuhlala kwakho namhlanje.
Wamkelekile kwiNkundla yaseVictoria, imizuzu entle nenika uphuhliso ukusuka kumbindi wedolophu yaseCrewe. Le ndlu ibekwe kumgangatho ophantsi wophuhliso, kwaye imele indawo entle yokuhlala yeengcali okanye iikontraka kwizabelo zomsebenzi kwindawo yaseCrewe, kunye neendwendwe zokuzonwabisa ezifuna indawo yokuhlala enenkonzo esemgangathweni kunye nemvakalelo yokwenyani yasekhaya-ekhaya.
Ukuba ufika ngemoto, zive ukhululekile ukutsala ngaphandle komnyango wangaphambili ukuze ukhulule izinto zakho.Kukho iindawo zokupaka ezisimahla ezingaphaya kwendlela ngasemva kwecawe endala - malunga neemitha ezingama-50.Kodwa makhe sijonge ngaphakathi, siqale ngesicwangciso esivulekileyo sokuhlala kunye nendawo yokutyela.
Nantsi indawo yasekhaya ukuba yayikhe yabakho, enesofa (eguquka ibe yibhedi) kunye nezitulo ezingamawele ezibekwe kufutshane netafile yekofu kwaye zibonelela ngombono omhle wegumbi elixhonywe eludongeni likamabonakude okrelekrele.Uya kuba nakho ukufikelela kwiakhawunti yeNetflix ehambelanayo, zonke iitshaneli zeFreeview kunye nosetyenziso oluninzi oludumileyo, kubandakanya iYouTube, iPlayer kunye neAll4.
Kukho ukukhanya okunomtsalane okujikeleze apha, kunye netafile yokutyela. Ke unokubuthana kwisidlo sokuhlala phantsi, amakhadi okanye imidlalo yebhodi, okanye usebenzise itafile njengendawo yokusebenza ukuba sisizathu sakho sokutyelela iCrewe.
Ngeengcango zepatio kunye negadi yakho yabucala, indawo enomtsalane egangathiweyo enezihlalo kunye netafile onokuthi uphumle kuyo kwaye ubaleke kuyo yonke ngexesha lokuhlala kwakho eCrewe.
Ngaphakathi kunye kufuphi negumbi lokuphumla likhitshi lendlu, enye indawo entle yale mihla enazo zonke izixhobo onokuthi uzifune ukuze uzimele geqe xa uhlala eCrewe.
Iikhabhinethi ezinesitayile kunye neendawo zokubala ziya kwenza le ndawo ibe yonwaba ekulungiseni zonke iintlobo zokutya.Ngoko khulula umpheki wakho wangaphakathi!
Xa ilixesha lokuba uhlaziyeke okanye ubethwe ngumoya, igumbi lokuhlambela liyindawo yanamhlanje enethayile epheleleyo ene-1.7m yokuhamba ngemvula yeshawari ngokuqinisekileyo eyona nto ibalaseleyo yesuite ekwabonisa iWC kunye nesitya sokuhlambela.
Ngokubhekiselele kwigumbi lokulala, elijonge egadini kwaye libonisa ibhedi enokulungiswa njengokumkanikazi okanye abantu ababini abangabodwa.Vele uvumele ababuki zindwendwe bakho bazi okukhethayo xa ubhukisha.
Kukho indawo eninzi yokugcina kwigumbi, ke qiniseka ukuba ukhulula iibhegi zakho kwaye wenze le nto ibe likhaya lakho ukusuka ekhaya ngexesha lokuhlala kwakho.
Le ndlu ikwintshona kumbindi wedolophu yaseCrewe, nazo zonke iivenkile, iivenkile zekofu kunye neendawo zokutyela ezifikelelekayo ngeenyawo.Ngokuqinisekileyo zininzi iindawo zokutyela onokukhetha kuzo kwindawo yasekhaya, kunye neevenkile eziluncedo kunye neevenkile ezinkulu, ngoko ke ukugcina iimpahla kunye nokubeka phezulu iikhabhathi kunye nefriji/isikhenkcezisi kwigumbi lokuhlala kuya kuba lula ngokwaneleyo.Ezinye iindawo ezimbalwa kwindawo yendawo ekufikelelwa kuyo ngokulula ukusuka apha ziquka:
Iziko leLifa leMveli laseCrewe
Iziko lokuThenga iMarike
Umbuki zindwendwe ngu- Crewe Short Lets At Victoria Court
Ababuki zindwendwe bakho bazimisele ukuqinisekisa ukuba zonke iindwendwe zikonwabela ukuhlala kwindawo yazo yokulala e-1 yokulala eCrewe.Indlu yonke kunye negadi yayo yabucala ebiyelwe ngodonga iya kuba yeyakho kuphela nokuba ubhukisha ixesha elide kangakanani.Qiniseka, ababuki zindwendwe bakho baya kuba sesandleni ukukunceda uphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nepropati kunye nommandla wendawo.
Ababuki zindwendwe bakho bazimisele ukuqinisekisa ukuba zonke iindwendwe zikonwabela ukuhlala kwindawo yazo yokulala e-1 yokulala eCrewe.Indlu yonke kunye negadi yayo yabucala ebiy…